Leet Developers - Page2of3- Developers | CTF Players | DevOps
Developers | CTF Players | DevOps
Laravel Storage File Permission (Best Solution)
Categories DevOps August 26, 2019
ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး Laravel မှာ အဖြစ်များတဲ့ Storage File Log File ကို Permission မရှိလို့ error တက်တဲ့အခါမှာ log ရိုက်တဲ့အခါ ဖြစ်တတ်တဲ့ Error လေးအတွက် Solution တခုကောင်းကောင်းလေး ရှာတွေ့ထားလို့ပါ။
Continue reading “Laravel Storage File Permission (Best Solution)”
MCSC 2019 (open level) A Few Crypto Write Up
Categories CTF August 21, 2019
1. R uoOk?(Cryptography)
I found some hints in the question.I know that it use ook cipher.I used online decrypter and got the flag.
Continue reading “MCSC 2019 (open level) A Few Crypto Write Up”
How to Setup Mysql Replication on Ubuntu 18.04 (Master-Slave)
Categories DevOps August 20, 2019
Master-slave replication was the very first replication option for MySQL database. It assumes that you haveasingle Master server that accepts both reads and writes and one or more read-only Slave servers. Data from the master server are asynchronously replicated to Slave servers.
Continue reading “How to Setup Mysql Replication on Ubuntu 18.04 (Master-Slave)”
MCSC 2019 Wait What?(forensics) Write up
Categories CTF August 20, 2019
Wait What? (Forensics)
Download Challenge File
This isaimage file with png extension.I opened it with stegsolve.
Continue reading “MCSC 2019 Wait What?(forensics) Write up”
MCSC 2019(Uni Level) ForensicaWrite up
Categories CTF July 18, 2019
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ တက္ကသိုလ် အဆင့် MCSC2019 က မေးခွန်းလေးတွေ ရလို ့ဖြေကြည့်ထားတာလေး ပြန်ရေးပေးချင်လို ့ပါ။ ချဲ ့လင့်ဖိုင်ကို dropbox မှာတင်ထားပေးတယ်တယ်နော် ။
Continue reading “MCSC 2019(Uni Level) ForensicaWrite up”
Windows Memory Forensics(Volatility)
Categories CTF, Useful Tools For CTF Players June 18, 2019
Note: Depending on what version of volatility you are using and where you may need to substitute volatility with vol.py)
Continue reading “Windows Memory Forensics(Volatility)”
CTF နဲ့ကျွန်တော် ပြီးတော့ ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ?
Categories CTF June 4, 2019
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ CTF ဆိုပြီး Cyber Security နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြိုင်ပွဲတွေ ကျင်းပလာတာ အခုဆိုရင် ပထမဆုံးပွဲ ကနေ တွက်မယ်ဆိုရင် ၄ ပွဲတိတိ ရှိလာပါပြီ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ Base CTF(2015) နှစ်ကုန် နဲ့MCSC 2018 မှာ ဝင်ပြိုင်ခဲ့ဖူးပြီး ပထမ ပြိုင်ပွဲမှာ စတုတ္ထအဆင့်နဲ့ပဲ ကျေနပ်ခဲ့ရပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ 2nd Prize ရခဲ့ပြီး ကျွန်တော်ကတော့ စင်္ကာပူ Cyber Conquest ကို အခြား ပထမရတဲ့ အသင်းက ဘော်ဒါတစ်ယောက်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားပြုအနေနဲ့အာဆီယံအဆင့်ပြိုင်ပွဲကိုသွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အဖွဲ့ထဲက ဘော်ဒါနှစ်ယောက်ကတော့ ထိုင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ Cyber SEA Games ကိုမြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုအဖြစ် သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ရခဲ့ဖူးတဲ့ CTF ကြောင့် အကျိုးကျေးဇူးတွေပါ။နောက်အားရင် စင်္ကာပူ ပြိုင်ပွဲအကြောင်း ကြုံတွေ့ရတာတွေ ရေးပေးပါအုံးမယ်။
Continue reading “CTF နဲ့ကျွန်တော် ပြီးတော့ ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ?”
VPS တစ္လံုးကို Proxy အေနနဲ ့သံုးမယ္
Categories Hacking Tutorials May 20, 2019
တချို့လူတွေသိပြီးသားလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ။မသိတဲ့သူတွေ အတွက် မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟက်ကာတွေဆိုရင်တော့ Proxy ဆိုတာဘာလဲသိကြမှာပါ အထူးသဖြင့် ဟက်ကာတွေသုံးသင့်ပါတယ်နော် :3
ဒါက တော့ ကိုယ်တိုင်ပိုစိတ်ချလို့ရတယ်ပေါ့နော် Trace လိုက်ရာမှာလည်းနည်းနည်းခက်ခဲသွားမယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။ Proxy Tools တွေအများကြီးရှိပေမယ့် ကိုယ်ဘာသာ လုပ်ကြည့်လို့လည်းရအောင်ပါ ကိုယ့် VPS ကိုပဲ Proxy အနေနဲ့သုံးပြီး Track လုပ်လို့ မရအောင် ကိုယ့် ရဲ့Activity တွေကိုစောင့်ကြည့်လို့မလွယ်အောင် လုပ်ခြင်းပါပဲ။ တချို့သော Block လုပ်ခံထားရတဲ့ Website တွေကိုလည်း ဒီနည်းနဲ့အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Continue reading “VPS တစ္လံုးကို Proxy အေနနဲ ့သံုးမယ္”
EC2 Instance တခုကို CloudWatch သုံးၿပီး Monitor ၾကမယ္
Categories DevOps May 13, 2019
ကျွန်တော် ဒီတခေါက် sharing လုပ်ချင်တာကတော့ မိမိရဲ့AWS EC2 Instance တွေကို AWS ရဲ့CloudWatch သုံးပြီး Monitoring လုပ်ခြင်းပါပဲ။ ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာ မိမိတို့ရဲ့Service တွေကို Monitoring လုပ်ခြင်းဟာ အလွန်ကို အရေးပါလှပါတယ်။ AWS မှာ Default အနေနဲ့basic monitoring က အစကတည်းက enable ဖြစ်ပီးသားပါ။AWS မှာ Basic Monitoring & Detailed Monitoring ဆိုပြီး နှစ်မျိုးပါပါတယ်။ Basic Monitoring ကတော့ အချိန်ငါးမိနစ်အတွင်းမှာ ရရှိတဲ့ Data တွေကို Charges မကုန်ပဲ ကြည့်နိုင်တာဖြစ်ပြီး Detailed Monitoring ကတော့ အချိန် ၁ မိနစ် အတွင်းမှာ ရရှိတဲ့ Data တွေကို monitoring လုပ်နိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Continue reading “EC2 Instance တခုကို CloudWatch သုံးၿပီး Monitor ၾကမယ္”
AWS RDs အကြောင်း
Categories DevOps April 23, 2019
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခေါက် sharing လုပ်ချင်တာကတော ့Amazon RDS ဆိုတဲ့ Amazon ကနေ
support လုပ်ထားတဲ့ Relational Database Instance အကြောင်းလေးပါပဲ။
ယနေ ့ခေတ်မှာဆိုရင် Data က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ် ကိုယ် ့Database တခုခုဖြစ်တာနဲ ့ပြန်ရဖို့ချက်ချင်းလိုပါတယ် ဆိုဒ်အကြီးတွေမှာဆို Database server ဆိုပြီးသပ်သပ်သုံးပေးရပါတယ်။ အသေးတွေမှာလည်း ခွဲသုံးသင့်ပါတယ်။Amazon RDS မှာဆိုရင် User တွေအတွက်အသင့်အသုံးပြုရင် ကိုယ်ရွေးချယ်ချင်တဲ့ Database အလိုက်တန်းပြီး အလွယ်တကူရွေးချယ်လို့ရပါတယ် Database Version တွေဟာဆိုရင် ကိုယ့် application အတွက်အရမ်းကို အရေးပါပါတယ် ဒါကြောင့်မို ့RDS မှာလည်း ကိုယ့်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Version အ
လိုက် create လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Continue reading “AWS RDs အကြောင်း”
Proudly powered by Mdy_L33ts
Represent To Leet Devlopers